I-Ultimate Guide ku-Nolvadex yokwelapha umdlavuza webele
Konke mayelana ne-Nolvadex
I-1.Iyini i-Nolvadex? Isebenza kanjani? I-2. I-Nolvadex isebenzisa
Isilinganiso se-3.Nolvadex Imiphumela ye-4.Nolvadex
I-5.Nolvadex isigamu-impilo Imiphumela emibi ye-6.Nolvadex
Izinzuzo ze-7.Nolvadex Izibuyekezo ze-8.Nolvadex
9.Nolvadex ukudayiswa I-10.Nolvadex yokwelapha ukungabi nabantwana kubesifazane
1. Kuyini i-Nolvadex? Isebenza kanjani?
Okwamanje, umdlavuza webele usinye sezifo ezivame kakhulu abesifazane ababhekana nazo. Ucwaningo oluningi lwenzile futhi lusenziwa ngezidakamizwa ezingasiza umuntu aphile impilo engenamdlavuza. I-Nolvadex (54965-24-1) ingenye yezokwelapha eziye zafakazela ukuthi ziyazuzisa ekuvimbeleni nasekwelaleni umdlavuza webele. Okunye kunokuba ukutholakala kwayo kuthole indawo esigabeni somhlaba jikelele.
I-Nolvadex (54965-24-1) iphilisi yomlomo eye yaphumelela ekwelapheni iziguli ezinomdlavuza wesiteji esihamba phambili. Itholakala ku-1966, futhi isifundo sayo njengomuthi wokwelashwa komdlavuza waqala ngo-1970. Ku-1998, yaba umuthi wokuqala ukuthola imvume evela ku-FDA ukusiza ukuvimbela umdlavuza webele. Ucwaningo lwenziwe ukuthi iNolvadex inciphise amathuba okuba nomdlavuza webele we-50% wabesifazane abasengozini enkulu yokuyihlakulela.
Ukuze uqonde ukuthi i-Nolvadex isebenza kanjani, kufanele wazi ukuthi amangqamuzana omdlavuza wesifu adinga i-hormone yabesifazane eyaziwa njenge-estrogen ukuze ikhule iphindwe. Ngakho-ke, i-Tamoxifen ikwazi ukuvimbela lokhu ngokuncintisana ne-estrogen ekubopheleleni kwi-estrogen receptors kumaseli omdlavuza webele.
I-Nolvadex (i-54965-24-1) ishiwo ngokusemthethweni njenge-modulator ye-estrogen receptor (SERM). Ngakho-ke, kunciphisa ukukhula nokukhiqizwa kwamaseli omdlavuza webele ngokuvimbela isrogen esiswini.
Okunye kune-Nolvadex elwa isrogen emangqamuzaneni omdlavuza wesifuba, futhi ikhophi imiphumela emihle eyenziwa yi-estrogen ohlelweni lomzimba. Kwabesifazane be-postmenopausal abasendaweni ye-tamoxifen, kunganciphisa ingozi yesifo senhliziyo kanye ne-osteoporosis (isimo esibangele ukuhoxiswa kwamathambo) ngaphandle kokuthola ukwelashwa kwe-hormone esikhundleni.
I-Nolvadex isetshenziselwe kusukela eminyakeni eminingi ekwelapheni izimo ezihlukahlukene. Kuza njengomsindisi neningi labesilisa nabesifazane ababhekene nezifo ezinjalo okungenani kanye ngesikhathi sokuphila kwabo. Nazi ezinye ze I-Nolvadex isebenzisa okwenze kwacaca;
I-Nolvadexmay inqunywe kubo bobabili besilisa nabesifazane njengokwelashwa kwesifo somdlavuza we-lymph node noma i-lymph node-negative ngemuva kokuhlinzwa okuphumelelayo. Ukusetshenziswa kwe-Nolvadex kuye kwafakazela ukuthi kuyasiza kakhulu uma ubhekene nomdlavuza onesiqiniseko se-estrogen ne-progesterone receptors. I-Nolvadex kunciphise ingozi yomdlavuza ukudluliselwa esifubeni esingehlukile.
Amadoda nabesifazane abanomdlavuza wesifuba we-metastatic (umdlavuza osakazekile) ungabekwa nge-Nolvadex.
Abesifazane abahlukunyezwa yi-ductal carcinoma in situ (DCIS) futhi asebevele behlinzekwa ukuhlinzwa kanye nemithi yokwelashwa bangase bazuze kulo muthi futhi. Kulesi simo, i-Nolvadexmay inciphisa ingozi yokuhlukunyezwa ngumdlavuza webele we-invasive. Ingozi kanye nenzuzo yokuthola le nqubo kufanele, kodwa, kucatshangelwe kusengaphambili.
Abesifazane abasengozini enkulu yokuthuthukisa umdlavuza webele bangabuye banikezwe nomuthi ukusiza ekuphikeleni amathuba okuba nawo. Izingozi kanye nezinzuzo zokuthola le mithi kufanele zixoxwe ngalesi simo.
Enye yeNolvadex engavamile isebenzisa ukwelashwa komdlavuza we-ovarian.
3. Isilinganiso se-Nolvadex
Umthamo we-Nolvadex akudingeki ube ophakeme ngokweqile ukuze usebenze; yi-SERM enamandla esebenza kahle kumthamo ophansi. Ukwelashwa, okuvamile Isilinganiso se-Nolvadex i-10-20mg, ephathwa kabili nsuku zonke.
Ngemiphumela ye-anti-estrogenic nepro-testosterone, isilinganiso se-Nolvadex kufanele sibe phakathi kwe-10-40mg ngosuku. Umthamo owukhethayo uxhomeke kubukhulu bakho, imigomo, kanye nesikhathi sesikhathi ofuna ukuba kuso.
Kuhle ukuphawula ukuthi inani eliphakeme le-Nolvadex alisho umphumela omuhle kakhulu. I-10-40 mg izokunika umthelela obalulekile nokushesha okudingayo ekunciphiseni imiphumela eyingozi yokuthatha i-anabolic steroids.
Azikho izinto ezikhethekile ezithathwe ngokuphathelene nokuphathwa kwe-Nolvadex. Kukhethile ukuwuthatha ngaphambi, ngemuva, noma ngesikhathi sokudla. Ungase ube nalo ekuseni noma ngesikhathi sokuhlwa. Ngezinye izikhathi kunconywa ukuthi akufanele uhlukanise umthamo we-Nolvadex.
4. Imiphumela ye-Nolvadex
I-Nolvadex ibangela ekuvinjeni komdlavuza yizinto ezinhle kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye izidakamizwa zomdlavuza. Imiphumela ibonisa ukunciphisa kwe-50% kwabesifazane abaye baphathwa kokubili umdlavuza webele ongenawo umonakalo. Ukuyithatha isikhathi seminyaka emihlanu kuya kweyishumi kuboniswe ukunciphisa ukuphindaphindiwe komdlavuza wesifuba esifanayo kanye nengozi yokuthi enye isifuba isifo.
I-Nolvadex nayo yenza kube yisisombululo esihle kakhulu ekwelapheni i-gynecomastia kokubili njengesidakamizwa sokuvimbela kanye nokuphathwa kokwelashwa kokuqala kokuqala okufanayo. Esikhathini sokutadisha okungahleliwe okwenziwe ngeziguli eziyishumi ngenyanga eyodwa, abayisishiyagalombili kubo bahlehla ukwehla kwamabele abo. Abane babo ababhekene ne-gynecomastia ebuhlungu bathola usizo. Kwakungabikho utshwala obubikiwe.
Ibuye inikeze imiphumela emihle ekukhuthazeni ukukhiqizwa kweTesttosterone njengoba sekubikwe ukuthi ibuyele emuva evamile emva kwamasonto amane.
5. I-Nolvadex isigamu-impilo
The I-Nolvadex isigamu-impilo lide kakhulu eliqhathaniswa namanye amakhemikhali omlomo. Kungaba izinsuku ezinhlanu ukuya kwezinsuku eziyisikhombisa ngezifundo ezithile ezibonisa ukuthi i-Nolvadex isigamu-impilo ingahamba isikhathi eside ezinsukwini eziyishumi nane.
6. Imiphumela emibi ye-Nolvadex
I-Nolvadex yisidakamizwa esethulwa eminyakeni engaphezu kwamashumi amahlanu edlule, futhi akumangazi ukuthi yonke into yayo isetshenziswe ngokwanele. It has izinzuzo eziningi, kodwa kukhona futhi Imiphumela emibi ye-Nolvadex lokho kungase kukukhathaze. Nokho, akusho ukuthi uma uqala ukuyithatha, kufanele ulandele imiphumela emibi ye-Nolvadex. Esikhathini esiningi, kungenzeka ungalokothi uhlupheke kunoma yimuphi wabo.
Ngokuvamile, imiphumela yecala le-Nolvadex iyabikezelwa ngokuya kwawo nokuthi uzobe uhlupheka isikhathi eside kangakanani kuzo. Kumele futhi uqaphele ukuthi imiphumela emibi ihlale iguqulwa njalo ihamba njalo uma usuqedile ukwelashwa.
Uma ulalele umzimba wakho, uzofunda ukuthi imiphumela emibi ingaba nzima ngaphansi kwezimo ezithile, futhi unganciphisa noma uzivimbele ngokwenza izinguquko ezithile. Eminye yemiphumela emibi ejwayelekile ihlanganisa;
Akekho othanda ukwenza kahle embhede, ikakhulukazi uma uyenzile kahle. Ngisho noma enye yezinzuzo ze-Nolvadex ukuthi yandisa amazinga e-testosterone, nayo ikwazi ukunciphisa ukushayela ucansi lomuntu. Ucwaningo lwenziwe lubonise ukuthi abanye abasebenzisi be-Nolvadex bakhononda nge-libido ephansi, kuyilapho kwabanye, kuba khona.
Ukulahlekelwa izinwele kungaba ubuhlungu. Ngeshwa, kuyinto evamile ngokusetshenziswa kwe-Nolvadex.
Ukuvuvukala ezandleni, ezinyaweni nasezinyaweni
Nakhu imiphumela emibi ye-Nolvadex edinga ukwelashwa okusheshayo;
Ushintsho embonweni wakho
Ukuzwa ucindezelekile (ungakwazi ukwenza imisebenzi yakho yansuku zonke ngokuvamile)
I-nausea (ukungakwazi ukudla noma ukuzwa ukukhululeka ngisho nangemva kokuthatha imithi ekhethiwe)
Ukukhishwa kwamagciwane ngokweqile kuhambisane nokuphuma kwegazi, ubuhlungu nokungahambisani nokuya esikhathini
Izibilini ezintsha zesifuba.
Ukuvuvukala, ubuhlungu, noma ukubomvu komunye wemilenze noma izingalo hhayi enye
7. Izinzuzo ze-Nolvadex
Abantu abaningi abamboni gynecomastia noma amadoda boobs njengesimo esibi, kodwa ngomqondo wangempela. Kuyinto ukuthuthukiswa kwezicubu zebele emadodeni. Ngokuvamile, kubangelwa ushintsho emahomoni owodwa ngenxa yezici ezifana nobudala noma ukusetshenziswa kwe-steroids.
Kulokhu, ukwanda kwesilinganiso se-estrogen / testosterone kungaba yimbangela ehamba phambili. Futhi, ukugqugquzelwa kwe-estrogenic noma ukunciphisa kwe-androgenic kwe-estrogen noma ukusebenzisana kwe-androgen kungaba yimbangela.
Amadoda ahlukumezayo aboni nje kuphela izinguquko ekubukeni kwawo, kepha angabangela nokulimala kwengqondo kubo. Okunye ngaphandle kokulahlekelwa ukuzethemba kwabo, kungenza umuntu ecindezeleke aze afune ukuzifihla. Okubi nakakhulu, kungenza umuntu azame kanzima ukuwafihleka khona ngoba ahambe amakhati amaningi futhi agweme imisebenzi engabonisa imizimba yawo, okungukuthi, ukubhukuda.
Namuhla, abantu abaningi abanalesi simo bahlale bebheke isisombululo esihlala njalo. Into enhle ukuthi, enye ye Izinzuzo ze-Nolvadex kungukuthi kunciphisa amabele aphezulu ngaphandle kokwenza umuntu abe nemiphumela emibi kakhulu. Ngakho-ke, i-Nolvadex inikeza ukhetho oluphephile futhi oluphumelelayo ekwelapheni amanye amacala we-gynecomastia.
Ukwandisa isisindo somzimba
Inqubo yokuthola ubuhlungu bemisipha ibonakala ingabi nzima kakhulu. Konke okuceliwe kuwe ukuphakamisa izisindo, kube nokudla okulungile, futhi uthathe izithako ezithokozisa umzimba. Uke wazibuza ukuthi ungenzenjani uma ushaya epulazini? Yimuphi umkhiqizo ongayisebenzisa uma udinga ukuphuma kuwo? Uthuthukisa kanjani ukukhula kwemisipha yakho?
Ukuthi enye ye-Nolvadex isebenzisa ukwandisa i-testosterone emzimbeni yenza kube nokukhetha okuhle uma ufuna ukwandisa isisindo sakho semisipha kakhulu. Yenza lokhu ngokusebenzisa isenzo se-hypothalamus ne-pituitary gland ebuchosheni. Lokhu kuholela ekwandeni ekukhiqizeni i-Follicle stimulating Hormone (FSH) kanye ne-Luteinizing hormone (LH), okuyinto ekhuthaza ukukhiqizwa kwe-Testosterone yi-testes.
Ngokwesibalo, uma umuntu ethatha i-20mg Nolvadex izinsuku eziyishumi, izinga le-testosterone egazini lakhe liyakwandiswa ngu-41%. Uma isetshenziselwa amasonto ayisithupha, amazinga we-testosterone angahamba phezulu njenge-84%.
I-testosterone i-hormone ekukhiqizeni kwayo ngokwemvelo emzimbeni. Kuyasiza ekuthuthukiseni ukuqala kwamaphrotheni emisipha, phakathi kwezinye izindima. Izinto ezihlukahlukene zingalimaza ukukhiqizwa kwe testosterone. Ukuze ulwisane nalokhu, ungasebenzisa i-Nolvadex ukwandisa ukukhiqizwa kwe-testosterone.
I-Nolvadex ingenye ye-SERMs engeyona i-steroidal, ngakho ikhombisa kokubili ukuphikisana kwama-Estrogenic kanye nemiphumela ye-agroist e-estrogenic emzimbeni. Lokho kusho ukuthi kwezinye izindawo, kungabangela imiphumela ye-estrogenic kanti kwezinye, kungabangela impikiswano ye-antiestrogenic. Omunye wemiphumela enjalo ukwanda komkhiqizo we-testosterone. Futhi kunciphisa imiphumela ye-estrogen emzimbeni.
Kungenxa yalesi sizathu ukuthi i-Nolvadex ibhekwa njengento ebalulekile uma umuntu efuna ukwenza ukwelashwa kwe-post cycle. Kungenxa yokuthi ngemva kokugijima umjikelezo we-anabolics steroids, bangawuguqula ube yi-estrogen. Ngenxa yalokho, umuntu angathola abantu boobs, okusho ukuthi ukuzuza kwakho kuyahamba. Ngokuvimbela i-estrogen, imiphumela emibi iyaqhubeka. Amazinga e-testosterone cishe abuyele evamile ngenxa yokusetshenziswa kwe-Nolvadex.
Ngokujwayelekile, i-Nolvadex iphathwa ngokushesha ngemva kokuba wonke ama-steroid anabolic asuswe emzimbeni womuntu. Omunye kufanele athathe i-20-40mg nsuku zonke amasonto amane kuya ayisithupha. Noma yiliphi inani eliphakeme kunalokho alinikezi nomphumela obalulekile.
Ngesikhathi se-PCT, i-Nolvadex iphathwa kanye okungenani eyodwa noma amabili ama-comptoticone stimulating compounds afana ne-aromatase inhibitor efana ne-HCG noma i-Aromasin. Inzuzo yokuyisebenzisa ndawonye ukuthuthukisa imiphumela nokukhuthaza umsebenzi we-HPTA.
Ukusetshenziswa kwe-Nolvadex ngesikhathi somjikelezo kufanele, kepha, kugwenywe uma uhlose ukuphikisana nokucindezelwa kwe-Testosterone ngoba cishe ngeke kusebenze. Lokhu kungasho ukuthi imali yakho izokwehla.
Ngokungafani neminyaka ethile edlule, ukulahlekelwa isisindo manje sekubhekwa njengenye yamathikithi okubukeka okuhle. Ngaphandle kokuba nezintambo ziphenduka, ukulahlekelwa isisindo kungasho ukuthi ufuna ukuphilisa. Ukukhipha amakholori angekho, kodwa akuyona into elula. Enye yezindlela ongaphumelela ngazo ekuhambeni kwakho kwesisindo ngukusetshenziswa kwe-Nolvadex.
Izifundo zenziwe Imiphumela ye-Nolvadex ukulahlekelwa isisindo kubonisa ukuthi kusebenza kahle kakhulu kunalokho okwakhiwe kuyo okwenzeni ukuphathwa kwesisindo. Ngokuvamile, i-Nolvadex ifakazele ukuthi ikhono lokusiza umzimba ukuthi ushise amafutha amaningi uma ukugaya umzimba kuholela. Kuholela emsebenzini ophuthumayo we-lipolytic ngakho-ke ukwanda kokushiswa kwamafutha.
Kanye ne-Clenbuterol, zingaholela ekunciphiseni umsebenzi we-lipoprotein lipase okuyi-enzyme ebalulekile ekusetshenzisweni kwe-triglyceride. Kokubili, bobabili bangenza imithi yokulahlekelwa isisindo. Ukwengeza, I-Nolvadex iyaziwa ukwandisa ikhono lomzimba lokushisa amafutha futhi likhulisa amazinga wamandla abalulekile ekusebenzeni kwamafutha ashisa.
Iqinisa ukusebenza komzimba
Uma sikhuluma ngesimiso somzimba samasosha omzimba, sibhekisela emandleni okulwa nezifo nezifo. Abaningi abangaziwa, i-Nolvadex inegalelo elihle esimisweni somzimba somzimba.
8. Ukubuyekezwa kwe-Nolvadex
U-Alexandra M. uthi, "Ngisebenzele izinyanga eziyisithupha zokugcina, futhi umzimba uguqukile wawungekho njengoba ngangilindele. Ngaqala ukufuna okuthile okuzoqinisa umzimba wami futhi ngisungulwe ku-Nolvadex. Imiphumela ye-Nolvadex imane nje iyamangalisa. Umswakama wami usukhulile ngokweqile, futhi ngizizwa sengathi lo mkhiqizo kufanele ubongwe ngokufanayo. Ngiyincoma kunoma ubani ofuna ukuba nemisipha emikhulu. "
Imithi enhle yokulahlekelwa isisindo
U-Priscilla K uthi, "Ngemva kokucwaninga okuningi, ngathola ukuthi enye yezinzuzo ze-Nolvadex isisindo somzimba. Angikwazi ukulinda ukuzama, futhi ngokushesha ngiyalile lapha; Ngithole iphakheji lami ngosuku. Kuze kube manje ngilahlekelwe ngamakhilogremu ayishumi, futhi angikaze ngijabule. Manje sekuyi-go-isisindo sokulahlekelwa izidakamizwa, futhi abangane bami nomndeni wami bafuna ukukuzama futhi. Angizange ngibhekane nemiphumela emibi ye-Nolvadex kuze kube manje, ngokungafani nalokho engikudlule lapho ngisebenzisa ezinye izidakamizwa zokulahlekelwa kwesisindo. Uma ufuna ukuchitha inqwaba ngaphandle kokuba ubuchopho bakho nenhliziyo yakho ihlupheke, yilokho okufanele uhambe Nolvadex. "
ULeila Wagner uthi, "Ngisanda kuthola isimangaliso sami seNolvadex ngesonto eledlule. Ucabanga ukuthi yisiphi isimangaliso esingase sibe? Ngemva kokuzama ukukhulelwa iminyaka eyishumi edlule ngaphandle kwenhlanhla, ekugcineni ngavivinywa okuhle ngosizo lwe-Nolvadex, futhi manje ngibambe inqwaba yami yenjabulo. Ngangingaqiniseki ukuthi ngizokwazi ukuthwala isikhathi, futhi ngiyajabula ukuthi ekugcineni ngenza. Ngisengakholelwa, futhi ngisanda ukubiza ingane yami isimangaliso. Noma ubani ozama ukukhulelwa kumele anikeze u-Nolvadex uzama. "
Isidakamizwa se-PCT esingcono kakhulu
UCassie Houston uthi, "Ngalalele umkhiqizo wami kumyeni wami ngoba wayeqale ukuthuthukisa amabele ngenxa yokusetshenziswa kwe-steroids. Kwamthinta kakhulu waze waze wahamba ngokugula ngenxa yokwenza amahloni. I-libido yakhe yayiphansi, futhi, futhi sasingakujabulela ukuhlangana ndawonye. Ngemva kokuba kulo mkhiqizo, uthi imiphumela ye-Nolvadex iyamangalisa. Konke manje sekuguqulwe, futhi ubuyela emuva evamile. Ama-boobs anciphise kakhulu, futhi ubuyele emsebenzini. I-libido manje isiphezulu kakhulu. Ngikholwa ukuthi lena yi-PCT engcono kakhulu ezokwenza i-Testosterone yakho ibe namandla. "
9. I-Nolvadex ukudayiswa
Ungase ufune Thenga i-Nolvadex powder njengesidakamizwa se-PCT noma ukubhekana nokungabi namandla. Futhi, kungenzeka ukuthi uphishekela ukuba nemisipha emikhulu noma ufuna ukuthola isisindo ngokushesha futhi kalula. Umbuzo oyinhloko lapho ungayifinyelela khona?
Enye yemibuzo evame kakhulu abantu ababuza ukuthi bangayithenga nini i-Nolvadex powder. Ungayithengi kuphela kodwa thola eyodwa enhle kakhulu futhi enenani lentengo. Uma ucabanga ukuthi kunezinhlobo eziningi ze-intanethi ongazithengayo, ungaqiniseki ukuthi ubani ohlinzeka nge-Nolvadex ephephile.
Ukuze uqiniseke ukuthi uthenga into efanele, ungakhetha ukuthenga I-Nolvadex ukudayiswa kusuka kithi. Ungase futhi uthenge i-Nolvadex ngobuningi ngentengo enhle uma inhloso yakho iyithengisa. Into enhle yukuthi nge-Nolvadex yethu, akunakwenzeka ukuthi uthole izihlungu zesisu noma ubuthi obuvela kuso; i-Nolvadex yangempela.
10. I-Nolvadex yokwelapha ukungabi nabantwana kubesifazane
Unenkinga yokukhulelwa nokuzizwa ucindezelekile? Awuwedwa. Izibalo zibonisa ukuthi ezungeze i-7% yabesifazane abashadile banezinkinga zokungabikho emhlabeni jikelele. Nokho, akusho ukuthi uma umuntu enenkinga, angeke abe nethuba lokubamba ingane yakhe.
Esinye sezimpikiswano eziyinhloko ezifaka ekutheni ukungabi nabantwana kuyinkinga yokuvota. Zingabangelwa yi-polycystic ovary syndrome, ebonakala ngokungalingani kwe-hormone ngakho kuphazanyiswa ukuvuthwa okuvamile. Izindaba ezinhle zikhona imithi enikezwa ngomlomo noma ngomjovo osiza umuntu ukukhiqiza amaqanda uma bebhekana nobunzima. Ngakho-ke, ukwandisa amathuba okuvota okwenzekayo.
Ngalokhu, umuntu angenza isikhathi esifanele ngakho-ke ngcono amathuba okukhulelwa. Okukodwa kwe I-Tamoxifen i-Citrate powder Izinzuzo ukuthi kuboniswe ukugqugquzela i-ovulation ngempumelelo. Futhi, kukhuthaza ama-ovari ukukhiqiza amaqanda amaningana uma omunye ekhiqiza eyodwa. Inzuzo nayo yukuthi ukusetshenziswa kwayo akuyona imali ebiza kakhulu futhi eyingozi njengokusebenzisa i-gonadotropin (imithi yokwelapha i-ovulation).
I-Clomid iwela ekilasini elifanayo njenge-Nolvadex, futhi zombili zijwayele ukusetshenziselwa ukwelapha ukukhathazeka kwe-ovulatory kwabesifazane abangenalutho. Zisebenza ngendlela efanayo futhi ziye zafakazela ukusiza ukukhuthaza ukuvuthwa ku-65-75% yabesifazane. I-Clomid, noma kunjalo, iza nemiphumela emibi njenge-thinning ye-endometrial lining ngakho-ke ayikwazi ukukhulelwa. Ngakolunye uhlangothi, akukho mibiko eyenziwe emiphumeleni ye-Nolvadex esibelethweni.
I-Tamoxifen: Ngaphandle kwe-Antiestrogen, KaJohn A. Kellen, ikhasi 1-201
UJohn F. Kessler, uGreg A. Annussek, uHarperCollins, 6 April 1999, 1-208
U-Tamoxifen, uDkt. Titus Marcus, oshicilelwe ngokuzimela, i-29thMarch 2019, 1-18